प्रधानमन्त्रीलाई जुम्ली छोराको १० भावुक प्रश्न
केपी शर्मावली ज्यु ।
तपाँई रारा पर्यटन वर्षको प्रमुख अतिथी एवम् मुख्य आकर्षक ब्यक्तित्व हुनुहुनुहुन्थ्यो । यहांकै कारण रारा पर्यटन महोत्सव भव्यताका साथ सफल भयो, यहांलाई पुनपनि सलाम, म एक कर्णालीको युवा भएको नाताले तपाईं नेतृत्वको सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छुं ।
१, तपाईं कर्णालीको स्वर्ग रारा पुग्दै गर्दा कर्णालीमा नर्क पनि छ, जहां गरिबी र विकासले छटपटिएको जनताको बस्ती पनि छ, भन्ने कुरो सोच्नु भयो कि भएन ?
२, तपाईं आकाशे बाटो भएर स्वर्गका देवताको रुपमा पुस्प विमान (हेलिकप्टर) चढेर टुप्लुक्क रारा पुग्नु भयो, तर तपाईंलाई दर्शन गर्न गएका जनता मृत्यु मार्गमा ज्यानलाई बाजी थापेर पुगेका थिए । मृत्यु मार्गको स्तरोन्ती गर्छु भन्ने कुरो ललिकति मनमा सोच्नु भयो की भएन ?
३, तपाईंलाई कर्णालीवासीले रारा पर्यटन वर्षमा निम्तोको पत्र दियौं, यहांको उपस्थित पनि भयो । फेरि हामी कर्णालीवासी विकासको आवस्यकता परÞ्यो भनेर पत्र दिने छौं, के तपाँईले सहर्ष स्विकार गर्नु हुनेछ ?
४, प्रधानमन्त्री ओली ज्यु तपाईं एक अहिलेको परिवेसमा राष्टको अभिभावक हो र हामी कर्णालीवासी स्रोतका धनी साधनका गरिब सन्तान हौं, अभिभावक महोदय तपाईंले साधन उपलब्ध कस्तो पहल गर्नुहुनेछ ?
५, हामी कर्णालीवासी उच्च दृढताका साथ भन्न सक्छौ, हामी संग पुरै देशको अर्थतन्त्र थेग्न सक्ने स्रोत छ तर उपयोग गर्ने साधनको कमी छ । प्रधानमन्त्री ज्यु हामी कर्णालीवासी यहां समक्ष आग्रह गर्दछौं, पहिला कर्णालीको विकास गर्नुस् त्यसपछि यो देशको आधा विकासको जिम्मा कर्णालीले लिनेछ, त्यसैले अब कर्णालीलाई विकास गर्न सरकारी निकायबाट के कस्ता कदम चाल्नुहुन्छ वा चालिएका छन् ?
६, आज कर्णालीको आधाबढि जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी छ ,औसत आयु ४८ वर्ष अब भन्नुस कर्णालीवासीको मानव विकास सुचकांकमा कहिले देखि स्तरोन्नती हुन्छ ? हामी दिन गन्ती गर्न सक्छौ ? आतुर पनि छौं ।
७, हामी कर्णालीवासी राजा महाराजाहरुको शासनकाल देखि संघिय लोकतान्त्रीक गणतान्त्रीक समयसम्म आईपुग्दा विकासमा सौतेनी सन्तानलाई हुने जस्तो व्यवहार खेप्दै आईरहेका छौं, अब यस्तो खाले व्यवहारबाट कर्णाली कहिले मुक्त हुन्छ ?
८, आज हामीसंग प्रशस्त जडुबुटी छ, प्रशोधन केन्द्र छैन । हामी संग वस्तु छ, बजार छैन, बजार छ, मुल्य छैन, मुल्य छ तर महंगी छ, यही महंगी छ त कर्णालीवासी दिनदहाडै ठगि रहेका छन् । ब्याप्त कालोबजारी छ, यस्ता समस्याबाट के कर्णाली मुक्त हुन्छ त ?
९, आज कर्णालीमा विस्व विद्यालय स्तरको स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान छ यो प्रतिष्ठान कोही कसैका लागि कर्मचारी भर्ती केन्द्र बन्न पुगेको छ, कर्णालीका प्रत्येक सरकारी कार्यलयमा कर्मचारी समयमा पुग्दैनन्, स्थानिय निकायका प्रतिनिधी सदरमुकाम केन्द्रित छन्, जनताले सानो सिफारीस समेत लिन सदरमुकाम धाउनु पर्छ, सास्ती खेप्न सम्म हामी कर्णालीवासीले खेपी सक्यौं, के हाम्रो यस्तो दिनचर्या हट्ला त ?
१०, र हाल कर्णालीमा तिम्रा जनप्रतिनिधिहरुले विकासको नाममा गरीरहेको विनास र भष्टचारको जिम्मा कसले लिन्छ ? अब त अति भैसक्यो प्रधानमन्त्री ज्यु, तिम्रा नियमन निकाय पनि मौन छन्, यस्तै गरिब जनताको पेटमा लातहान्ने विकृतीबाट कर्णालीले कहिले छुटकारा पाउंछ ?
उहि जुम्ली छोरो प्रेम खत्रि,
अखिल क्रान्तीकारी विद्यार्थी संघ
प्रकाशित मिति : ६ बैशाख २०७५, बिहीबार